၂၇၅၃ -ခုနှစ် (၁၅) ကြိမ်မြောက် တိုကျို ဂျပန် ကရင်အမျိုးသား နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ
ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျို တွင် ကရင်မိသားစု စုံလင် စည်ကားစွာ ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသောကြောင့် ကရင်တိုင်းရင်းသား ညီအကို မောင်နှမ များနှင့် ရင်းနှီခင်မင် ရပါသော မိတ်ဆွေ အပေါင်းတိုကို နွေးထွေးစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားနှိးဆော်အပ်ပါသည်။
နေ့ ရက်။ ။ ၂၀၁၄ ဇန်န၀ါရီ လ ၅ ရက် (တနင်္ဂနွေ နေ့ )
အချိန် ။ ။ နေ့ လည် ၁း၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၆၀၀ နာရီထိ
နေရာ ။ ။〒170-0013 Seiko Sunshine Building B1 Floor 1-30-6 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku
日　－　2014年1月5日（日曜日）
時間　－　13：00　時　～　18：00　時
場所　－〒170-0013　豊島区東池袋1-30-6　セイコサンシャインビルB1階
We, Karen Peoples in Japan will held our Karen New Year Ceremony on comming 5th January 2014 . So please come and Join together with us for this occasion.
We hope that New Year will be pleasured for all of you. We are looking to see all of you.
Karen Organization in Japan.
Date: : 2014 /1 /5
Time: : 1:00 PM to 6:00 PM
Place: :〒170-0013 Seiko Sunshine Building B1 Floor 1-30-6 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku.
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:36 PM
၂၇၅၃ -ခုနှစ် (၁၅) ကြိမ်မြောက် တိုကျို ဂျပန် ကရင်အမ...